Monkfish ine prawns mumuto, dhishi rizere nekuravira uye rakanaka kwazvo. | Kicheni Mapepa
Monkfish ine prawns mumuto
Montse Morote | | Mapinda Anopisa, Kisimusi mabikirwo, Easter Recipes
Nhasi ndinokuunzira chikafu chandinogara ndichigadzirira zuva rimwe remafaro aya, ndiro ye Monkfish ine prawns mumuto, dhishi risinganetsi rinonaka.
Hove dziripo kwazvo pamhemberero idzi uye kugadzirira dhishi rakanaka harigone kupotsa sezvo risingambokundike. Monkfish hove yakasimba yenyama uye neyakareruka kubvisa musana iyo yakanaka kugadzirira mumuto, asi inogona kugadzirirwa nedzimwe hove dzakadai sehake, sea bream ...
Prawns kana prawns 2-3 pamunhu
1 huru cuttlefish
½ kilo yetamati yakapwanyika kana
125 gr. tomato yakakangwa
1 girazi rewaini chena 150ml.
Zvimedu zvitatu zvechingwa chakakangwa
1 girazi remuto (ine monkfish mapfupa)
3 tablespoons yeupfu
Kugadzirira iyi monkfish dhishi nemaprawuni mumuto, isu tichatanga nekugadzirira muto nemapfupa emonfish uye misoro ye prawn. Isu tinoisa mafuta mashoma muhombodo, songa misoro yeprawuni, wedzera mapfupa emonfish uye tofukidza nemvura. Wedzera munyu mushoma, rega ubike kwemaminitsi makumi maviri mushure mekunge watanga kufashaira. Tinodzima uye tinochengetedza.
Isu tinoisa casserole ine mafuta mashoma pamusoro pekupisa kukuru, isu tinopfuudza iyo prawns kumativi ese maviri. Tinotora uye tinochengetedza.
Isu tinoisa munyu hove, toiisa muupfu uye kuisvibisa mupani imwechete nemafuta mashoma. Tinotora uye tinochengetedza. Isu tinoseta iyo cuttlefish yakatemwa kuita zvidimbu uye isu tinoisawo iyo uye toiburitsa kunze.
Isu tinogadzira muto, tochekera hanyanisi toiwedzera mupani imwechete patakasvibisa hove, tinogona kuwedzera mamwe mafuta kana zvichidikanwa. Tinoisvibisa zvishoma uye tinowedzera tomato, regai ibike, ini ndinoisa chingwa kune rumwe rutivi kuti chigadzire uye ndisiye nemuto kuti usanganise.
Kana taona kuti muto wacho, tinowedzera muto muto nekukuya.
Kana ikangopwanywa tinowedzera iyo chena waini. Isu tinorega doro richiderera kwemaminetsi mashoma.
Wedzera cuttlefish, sanganisa muto uye wedzera 1-2 magirazi emuto, rega ibike kwemaminitsi gumi. Cuttlefish inoda kumwe kubika.
Isu tinowedzera monkfish kune casserole. Tinoisiya kwemaminitsi gumi nemasere. Tinoravira muto wemunyu.
Kana isu tichiona kuti monkfish iri mukuda kwedu, isu tinoisa iyo prawns kumusoro, kudzima uye kuvhara casserole uye ivo vanopedza kubika.
Uye gadzirira yedu casserole yemonfishfish mumuto ne prawns mumuto.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » Shamwari » Mapinda Anopisa » Monkfish ine prawns mumuto
Cucumber uye feta saladi